Toriteny 16 febroary 2014 | FJKM Amboniloha
Toriteny 16 febroary 2014
Zakaria 8:1-8 / Lioka 6:46-49 / II Korintiana 6:1-10
“… Indro , hamonjy ny oloko , avy any amin’ny tany atsinanana sy amin’ny tany andrefana Aho, ary hitondra azy Aho, ka honina any Jerosalema izy, ary Izaho kosa ho Andriamaniny amin’ny fahamarinana sy ny fahitsiana …” Zakaria 8:7-8
Zanak’Israely tao anatin’ny fahababoana ary maniry te hiverina amin’Andriamanitra. Teo indrindra no nisian’ny antson’Andriamanitra ny avy any andrefana sy ny atsinanana ka nanambarany fa hamerina amin’ny laoniny ny fiainan’ny olony Izy.
Fa amin’ny fomba manao ahoana moa no anambaran’Andriamanitra amin’ny Teniny izany famonjena izany ?
1- Hanavao ny fiainan’ny olony Andriamanitra
Aoka hanaiky isika fa marary sy rava ka hamantatra ny tenantsika mitady fanasitranana fa tsy ho maika hijery ny fahapotehan’ny hafa.
Babon’ny fahavalo ny Zanak’Israely, rava ny Tempoly izay midika koa ho faharavan’ny fifandraisan’ny olona amin’Andriamanitra.
Niantso ary nanangona ny Zanak’Israely Andriamanitra, izany hoe ho fiovam-po amin’ny toetra anaty, na fibebahana mba hahatonga azy ireo ho olom-baovao.
Tempolin’Andriamanitra ny tenanareo, hita fa simba sy rava izay eo amin’ny tokantrano, ankohonana, fianam-piangonana sns… . Hamerina izany amin’ny laoniny Andriamanitra ary hanasitrana ny olony Izy.
2- Ankatoavy izay lazain’ny Tenin’Andriamanitra
Feran’ny olona ny fitaizana ataon’Andrimanaitra aminy ka lasa manalavitra an’Andriamanitra izy ireo ; hany ka lasa malaina amin’ny fankatoavana ny Tenin’Andrimanitra.
Tsy izay rehetra tonga ato am-piangonana akory no antsoina hoe olona ankasitrahan’Andriamanitra. Saro–piaro amin’ny fahatezerana Andriamanitra ka tsy mandefitra amin’izay rehetra milaza azy ho mivavaka nefa mandà ny sitrapony.
Voamarina fa manaiky an’Andriamanitra amin’ny saina ny olona saingy amin’ny endrika ivelany fotsiny, hitany fa toa mety ihany ny fiainany, mahavita izay atao ihany izy nefa ireny dia tena endriky ny fitiavana sy ny fahari-pon’Andrimanitra aminy.
3- Lesona : Asehoy amin’ny asa vavolombelona fa momba anao Andriamanitra
Kamo mandray andraikitra ny olona satria mandany vola, mandany fotoana ary tsy te hisahirana.
Ny fananganana ny Tempoly dia mitaky asa sy andraikitra ho vavolombelon’ny hery sy fahefan’Andriamanitra. Mila vola, mila fotoana izany ary indrindra ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana rehetra nomen’Andriamanitra. Ny famonjena azontsika dia maniraka antsika hiasa ary tena asa hita maso anehoana fa tena misy, ary momba antsika Andriamanitra. Izany no tena fitoriana velona mipaka any am-pon’ny olona ka mahatonga azy ireo hiaiky hoe hanaraka anareo izahay fa Andriamanitra no momba anareo.
Prezida Synodaly KRI.FA.TA Toamasina
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 18 février 2014